बुवाले खुकुरीले काट्ने धम्की दिएपछि बालकको बिचल्ली – SidhaRekha
बुवाले खुकुरीले काट्ने धम्की दिएपछि बालकको बिचल्ली
२०७४ फाल्गुन १०, बिहीबार १३:३५ February 22, 2018
बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिका वडा न. ८ डुङराका १३ बर्षिय रञ्जन भट्ट कक्षा ८ मा अध्ययन गर्छन् । तर उनी आफ्नै बुवा बाट दिनरात पिटाई खाएर बसेको बताउछन् । रञ्जन डेड बर्षको छदैँ उनका बावु मनोज भट्ट प्रहरीको जागीर छोडेर घर बसे र आफ्नी श्रीमती (रञ्जनकी आमा) दिपा लाई घर बाट निकाले ।
तर छोरा रञ्जनलाई आफु संगै राखे, रातदिन मदिरा सेवन गर्ने मनोजले केहि बर्षमा आफ्ना ८० बर्ष नाघेका आमा बुवालाई समेत घर बाट निकाले, हाल उनिहरु (रञ्जनका बाजे बज्यै) कञ्चनपूरमा अर्काको घरमा काम गरेर बसिरहेका छन् ।
२४ सै घण्टा मदिराको नसामा रहने मनोजले छोरा रञ्जनलाई दिन प्रतिदिन पिट्ने गर्दछन् । र खुकुरीले घाटी रेटेर मार्ने धम्की दिईरहन्छन् । धेरै पटक गाउलेले रञ्जनलाई बचाए तर उनका बावुको बानि संग सबै गाउले डराउन थाले, छिमेकीको घरमा बस्दै आएका रञ्जनलाई छिमेकीकै घरमा गएर मार्ने भनी खुकुरी देखाउने भएपछि गाँउले समेत त्रसित छन् ।
रञ्जनलाई गाँउका केहि युवाले मंगलबार दशरथचन्द नगरपालिकामा पु¥याए, केहि सहयोग मिल्छ की भनेर हामीले रञ्जनलाई नगरपािलकामा पु¥याएका हाँै स्थानीय तर्कराज भट्टले भने, उनलाई गाउमा बस्न निकै अप्ठ्यारोछ यिनका बाउले जतिबेला पनि मार्न सक्छन् केहि भर छैन्, २४ सै घण्टा रक्सीको नसामा हुन्छन् हामी युवाहरु घरमा भएपछि बचाउन सकेका थियौँ मनोजले मेरो छोरालाई म जे गरुँ तलाई के मतलब भनी मलाई नै २ चोटी खुकुरी प्रहार ग¥यो, तर हामी बाच्यौँ उनले भने ।
मलाई १३ बर्ष भयो म कक्षा ८ मा पढ्छु, म जन्मेको २ बर्ष सम्म मात्रै मेरो घरमा बसे त्यसपछि छिमेकी दाई संग बस्दै आएको छु । बुवाले म डेड बर्षको छँदा जागीर छाडेको हो, जागीर छोडेर घर आएपछि मेरो मम्मीलाई घर बाट निकाला ग¥यो रे ! ममिको अनुहार पनि थाहा छैन् कता जानुभयो ।
त्यसपछि बाजे बज्यैले मलाई हुर्काउदै थिए, १ बर्ष पछि उनीहरुलाई पनि घरबाट निकाल्यो, पछि अर्को बिहे गर्नुभयो, र मेरो सानो मम्मिले पनि मलाई मायाँ गर्नु हुन्थ्यो उहाँलाई पनि घरबाट निकालेको २ महिना बित्यो अब मलाई खुकुरीले काट्छु भन्छन् म के गरुँ, कतै बुवाले देख्न नसक्ने ठाँउमा जान पाए हुन्थ्यो, नत्र मलाई बँचाउदैनन् दिनरात रोएर मात्रै बसेको छु ।
अरुका बुवा आमा ले माँया गरेको देख्दा आफ्नो पनि यस्तै भैदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ, मलाई आमाको सधैँ याद आउछ, रञ्जनले रुदँै भने, डर लागी रहन्छ रञ्जन भन्छन् । रञ्जन पढाईमा मेहेनती र राम्रो भएको उनका छिमेकी तर्कराज बताउछन् ।
दशरथचन्द नगरपालिकाको पहलमा रञ्जनलाई अब महिला तथा बालबालिकाका कार्यालयले सञ्चालन गरिरहेकोे सेफ हाउसमा राखिने भएको छ । उनको बुवा बाट बचाउन् उनलाई (असहाय सेवा केन्द्र) सेफ हाउसमा राख्ने र पाटनमै रहेको श्रीकृष्ण माद्यमिक विद्यालयमा पढाउने ब्यवस्था मिलाएको दशरथचन्द नगरपालिकाका उप–प्रमुख मिना चन्दले बताइन् । उनलाई बुधबार नै पाटनमा रहेको सेफ हाउसमा पु¥याएको उनले बताइन् ।
उनलाई केहि समयका लागी सेफ हाउसमा राखिएपनि कक्षा ८को परिक्षा दिएपछि उनलाई धनगढिमा रहेको एसोएस अनाथ आश्रममा राखिने महिला बिकाश अधिकृत अनिता बुढाएरले बताइन् । रञ्जनलाई जिल्ला बाल कल्याण कोषमा रहेको ५० हजार रकम बाट सहयोग प्रदान गर्न पहल गर्ने पनि बुढाएरले बताइन् ।
अघिल्लोयाँ सम्झीन्या कोई भएन डेउडा गीतको म्युजिक भिडियो सार्बजनिक (भिडियो सहित)
पछिल्लोसरकारको मुख नताकी नमुना स्कुल बनाए हरिशकिरणले